Fahasamihafana eo amin'ny Alpha Beta sy ny Gamma Proteobacteria | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny Alpha Beta sy ny Gamma Proteobacteria | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Trano / siansa & natiora / siansa / biolojia / Microbiology / fahasamihafana eo amin'ny Alpha Beta sy ny Gamma Proteobacteria
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny alpha beta sy ny gamma proteobacteria dia ny alpha proteobacteria sy beta proteobacteria dia monophyletic raha ny gamma proteobacteria kosa paraphyletic .
Proteobacteria dia an'ny phylum misy bakteria gram-negatif miaraka amin'ny membrane ivelany izay misy lipopolysaccharides. Ity fizarana proteobacteria ity dia misy karazana pathogens isan-karazany, toy ny Escherichia , Salmonella , Vibrio , Helicobacter ary karazan-java-malaza maro hafa. Misy kilasy proteobacteria enina miorina amin'ny filaharana RNA (rRNA) ribosomal. Ny Alpha, beta ary gamma dia kilasy proteobacteria telo toy izany. Ny kilasy kilasy alpha, beta, delta ary epsilon dia monophyletic foana raha ny kilasin'ny gamma proteobacteria kosa dia paraphyletic noho ny genus Acidithiobacillus . Ny fandalinana Multigenome fampifanarahana dia nanambara ireo fandinihana etsy ambony.
2. Inona avy ireo Alpha Proteobacteria
3. Inona avy ireo Beta Proteobacteria
4. Inona ireo Gamma Proteobacteria
5. Ny fitoviana eo amin'ny Alpha Beta sy ny Gamma Proteobacteria
6. Fampitahana mifanila - Alpha Beta vs Gamma Proteobacteria amin'ny endrika Tabular
Inona ireo Proteobakteria Alpha?
Alphaproteobacteria dia kilasin'ny proteobacteria izay monophyletic foana. Izy ireo dia zavamananaina oligotrofika monina amin'ny tontolo otrikaina ambany toy ny sediment an-dranomasina lalina, ranomandry glacial, ary tany ambany ambany. Ao amin'ity kilasy ity dia misy taksy roa toy ny chlamydias sy rickettsias . Ireo taxa ireo dia zavamananaina intracellular. Tsy afaka mamokatra ATP irery izy ireo. Noho izany, matetika miankina amin'ny sela hampiantrano ho an'ny filan'ny angovo.
Sary 01: Alpha Proteobacteria
Misy spp Rickettsia maromaro, izay otrikaretina olombelona. Ny R. rickettsii dia miteraka tazo mararin'ny tendrombohitra (meningoencephalitis) raha i R. prowazekii kosa dia miteraka aretin-tratra. Mifanohitra amin'izany, Chlamydia ( C. trachomatis ) dia miteraka aretina amin'ny maso toy ny trachoma, izay matetika miteraka fahajambana.
Inona ireo Beta Proteobacteria?
Beta proteobacteria dia kilasy proteobacteria hafa izay eutrofika, izay midika fa mitaky otrikaina voajanahary be dia be izy ireo. Matetika izy ireo dia maniry eo anelanelan'ny faritra aerobika sy anaerobika toy ny tsinay mampinono. Ny karazana proteinina bakteria beta dia otrik'aretina olombelona. Ohatra, ny karazana; Neisseria dia bakteria mahafaty.
Sary 01: Beta Proteobacteria
Ny karazana N. gonorrhoeae dia miteraka aretina azo avy amin'ny firaisana antsoina hoe gonorrhea. N. Meningitides dia miteraka meningite amin'ny bakteria. Ny Neisseria dia kôkôra mivelona amin'ny velaran'ny mucosal amin'ny vatan'olombelona. Ny pathogen Bordetella pertussis, izay miteraka pertussis (kohaka kohaka) dia mpikambana ao amin'ny beta proteobacteria. Avy amin'ny baikon'ny Burkholderiales izy io .
Inona ny Gamma Proteobacteria?
Gammaproteobacteria no kilasy proteobacteria maro karazana. Izy ireo dia paraphyletic. Ity kilasy ity dia misy pathogens olona maromaro. Ohatra, maro an'isa amin'ny fianakaviana Pseudomonaceae , izay misy ny karazana Pseudomonas dia tonga eo ambanin'ity kilasy ity. P. aeruginosa dia karazana ao anatin'ny sokajy voalaza etsy ambony. Izy ireo dia gram -negative, aerobic hentitra, tsy misy fihenam-bidy, otrikaretina mahery setra. P. Aeruginosa dia miteraka aretin-kibo, aretin'ny taovam-pisefoana, aretin-koditra, aretin-koditra malemy, bakteriaemia, aretin-taolana sy tonon-taolana, aretin-koditra gastrointestinal, ary aretina isan-karazany.
Sary 03: Proteobakteria gamma
Pasteurella haemolytica, izay miteraka pnemonia mahery amin'ny ondry sy osy, dia an'ny proteobacteria gamma ihany koa. Ankoatr'izay, ny genus Haemophilus izay misy pathogens olombelona roa, H. influenzae sy H. ducreyi, dia tafiditra ao amin'ity kilasy ity ihany koa. Ohatra iray hafa malaza amin'ny gamma proteobacteria ny order Vibrionales , izay misy ny pathogen Vibrio cholerae . Vibrio cholera no mpamorona cholera. Izany dia vokatry ny poizina novokarin'ny Vibrio cholerae t izay miteraka hypersecretion ny elektrolita sy ny rano ao amin'ny tsinay lehibe. Amin'ny farany dia miteraka fivalanana be loatra sy tsy fahampian-drano.
Inona avy ireo fitoviana eo amin'ny Alpha Beta sy ny Gamma Proteobacteria?
Izy ireo dia proteobacteria tsy misy lanjany.
Ireo kilasy rehetra ireo dia misy otrikaretina olombelona.
Izy rehetra dia misy fonosana ivelany izay misy lipopolysaccharides.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Alpha Beta sy ny Gamma Proteobacteria?
Ny proteobacteria alfa sy ny proteobacteria beta dia monophyletic, raha ny gamma proteobacteria kosa dia paraphyletic. Noho izany, io no fahasamihafana lehibe eo amin'ny alpha beta sy ny gamma proteobacteria. Ankoatr'izay, ny kilasy alpha beta proteobacteria dia ahitana ny razamben'ny razambe iraisana satria monophyletic izy ireo. Na izany aza, satria paraphyletic ny gamma proteobacteria, dia tsy tafiditra ao ny taranaky ny razambeny. Noho izany, fahasamihafana lehibe iray hafa eo amin'ny alpha beta sy gamma proteobacteria.
Ity ambany ity dia famintinana ny fahasamihafana misy eo amin'ny alpha beta sy ny gamma proteobacteria amin'ny endrika tabular.
Famintinana - Alpha Beta vs Gamma Proteobacteria
Ny Proteobacteria dia mizara ho sokajy samihafa, izay resahan'ny litera grika avy amin'ny alpha mankany epsilon. Ny fizarana alpha, beta, delta, epsilon dia monophyletic, fa gamma proteobacteria dia paraphyletic noho ny karazana Acidithiobacillus . Nohamafisin'ny fandalinana fampifanarahana multigenome. Noho izany, ity no fahasamihafana lehibe eo amin'ny alpha beta sy ny gamma proteobacteria.
1. “Microbiology.” Lumen, Hita eto .
2. "8.7A: Topy maso momba ny Proteobacteria." Biolo LibreTexts, Tranomboky, 3 Janoary 2021, Hita eto .
1. "Wolbachia" Nosoratan'i Scott O & # 039; Neill - Filaharana Genome an'ny bakteria Intracellular Wolbachia. PLoS Biol 2/3/2004: e76. doi: 10.1371 / journal.pbio.0020076 (CC BY 2.5) via Commons Wikimedia
2. “ Burkholderia pseudomallei 01 ” (Public Domain) via Commons Wikimedia
Fahasamihafana eo amin'ny viriosy sy ny Prion Fahasamihafana eo amin'ny NAG sy ny NAM Fahasamihafana eo amin'ny Beta Lactam sy ny Non Beta Lactam Fahasamihafana eo amin'ny Oomycetes sy Zygomycetes Fahasamihafana eo amin'ny kolontsaina sy ny haino aman-jery amin'ny microbiology
Debasish Mondal hoy izy
15 Jolay 2021 tamin'ny 7:31 maraina
voasoratra tena tsara
Fahasamihafana eo amin'ny Basophil sy Eosinophil
Fahasamihafana eo amin'i Anus sy Cloaca
Fahasamihafana eo amin'ny saribakoly zazakely sy ny nightie
Fahasamihafana eo amin'ny Business Casual sy ny Professional Professional
Fahasamihafana eo amin'ny simika simika sy elektrika